एनआरएनए युरोपमा सम्मेलनको चटारो, हिजोका गल्तिको समिक्षा होला त ?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एनआरएनए युरोपमा सम्मेलनको चटारो, हिजोका गल्तिको समिक्षा होला त ?
बेल्जियम । लग्जेम्बर्गमा हुन गैरहेको युरोपियन सम्मेलनबारे छलफल सहित तयारीमा होमिएको एनआरएनए युरोपले आफ्नो तयारीलाई अन्तिम मध्यतिर पुर्याएको जनाएको छ। आगामी जुलाई २९ र ३० मा हुने एघारौं एनआरएनए युरोप सम्मेलनको तयारीका लागि उपसमितिहरु र त्यसका संयोजकहरु घनिभूत रुपमा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा जुटिरहेको बताएका छन्।
लग्जेम्बर्गको हिल्टन जस्तो महँगो तारे होटलमा गर्न लागिएको गैह्र आवाशीय नेपालीको युरोप स्तरीय सम्मेलनले यो पटक नेपालीहरुका आन्तरिक तथा बाह्य समस्याहरुको बारेमा के कसरी सम्बोधन गर्ला ? त्यो त सम्मेलन सत्रभित्र आउने बिषयगत बहस पछि मात्र थाहा होला।
तर त्यसबारे चलेको बाह्य बहस र नेतृत्वको प्रक्रियालाई हेर्दा बिगतका सम्मेलनहरु भन्दा यो पटकको सम्मेलन पृथक हुनेमा आशंका गर्न सकिने ठाउँहरु देखिन थालेका छन्। प्रथम कुरा त तारे होटल नै आयोजकको रोजाइमा पर्नु उनीहरुको व्यवस्थापकीय बाध्यता हो वा नेपालबाट आउने भनिएका व्यवसायी, पत्रकार र अन्य विशिष्ठ पाहुनाको छाँयामा ल्याइने आकृतिहरुको प्रवेश आज्ञा सहजताको लागि हो ? त्यो आयोजकले स्वीकार नगरेता पनि अघिल्ला सम्मेलनहरुको पुनरावृतिमा कहि न कहिँ मेल खान्छ भन्नेलाई सहज उत्तर दिन आवश्यक देखिन्छ।
५०० भन्दा बढी अतिथि ल्याइने सम्मेलनका आयोजकले बताई सकेका छन्। ति सबै आगन्तुकहरुको आवश्यकता र औचित्यता त सम्मेलनमा उनीहरुले खेलेको भूमिकाले पुष्टी गर्ने नै छ। अन्य देशबाट आउने सहभागीहरु स्वाभाविक पनि हुन्छन र उनीहरुको भूमिका आवश्यक पनि रहन्छ। बिशेषत नेपालबाट आउने पाहुना मध्ये परराष्ट्रमन्त्री र भुतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वाभाविक पाहुनाहरु हुन्। त्यस्तै गैह्र आवासीय नेपाली संघको लगानीबारे चाँसो राख्ने, सघाउने र कानूनी सहजताको लागि मरि मेट्ने विद वा सम्बद्ध व्यक्तिहरु सम्मेलनमा हुने बहस, आर्थिक योजना वा लगानी नीतिबारे हुने छलफलमा भाग लिन पाउनुलाई पनि अस्वभाविक मान्न सकिदैन।
पत्रकारहरुको बिषयमा पनि ति कुरा जायज हुन सक्छन् तर त्यसको छायाँमा हुने, गरिने वा हुन सक्ने कतिपय पुराना चलखेलहरु यो पटक नदोहोरिउन भनेर आयोजक तथा आयोजक देशको राष्ट्रिय समन्वय समिति चनाखो भने हुनै पर्छ।
अर्को तर्फ हिजोका सम्मेलनहरु त्यति लयमा चलेका देखिएनन्। छलफलका बुँदा अनुसार गति लिन नसकेको र औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको सम्मेलनमै सहभागी भएर आएकाहरुले बताउछन्। यो पटक त्यसको क्रमभंग हुन्छ की हिजोकै शैली समात्छ त्यो त सम्मेलन पछि नै भन्न सकिएला।
युरोपको २७ देशमा रहेका एनआरएनए अभियन्ताहरु आफ्नो देशका साझा समस्याहरुबारे आफ्नो राष्ट्रिय टिमसंग बहस गरी सम्मेलनमा आउँदा स्वयंलाई सहज हुने र आन्तरिक तथा लगानी सम्बन्धि आफ्नो धारणा बुँदागत रुपमा राख्दा बहस बढी उत्पादक हुने देखिन्छ।बहसमा समयको मिलनलाई समेत यसले सहजता प्रदान गर्ने हुन्छ। सुन्ने सुनाउने र छलफललाई बिषय केन्द्रीत बनाउन हामीले राष्ट्रिय टिमसंगको छलफललाई निर्णायक बनाउनु जरुरी छ। नत्र आफ्नो बोल्ने समय सक्ने बाहेक उपलब्धि नहुन सक्छ।
आयोजकले पनि विषय प्रवेश भन्दा अगाडी कर्म भूमिका समस्यासंग सम्बन्धित, जन्म भूमिको प्रयटन प्रबर्धनसंग सम्बन्धित, आन्तरिक तथा मुलुकमा लगानीसँग सम्बन्धित, सीप हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित, एकल तथा एकीकृत पुँजी प्रबाहसंग सम्बन्धित र भाषा, संस्कृति, साहित्य वा अन्य डायास्पोरिक बिषयसँग सम्बन्धित राय, सुझाब सहित छलफलको लागि एजेण्डा शीर्षक तय गर्दा समीक्षामा पुग्न सहज वातावरण बन्न सक्थ्यो।
यो भन्दा अगाडिका सम्मेलनहरुमा कुराहरु त धेरै भए होलान, शीर्षक अनुसार छलफल पनि भए होलान् र सम्मेलनको बृहत् समिक्षा पनि भए होला। तर एनआरएनले बुझ्ने गरेर त्यो बाहिर आउन सकेन। निर्णय कति पुरा भए, कति अपुरा वा अधुरा, त्यति बेलाका आयोजकहरुले बाहेक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसको समिक्षा गरिएन, त्यो जागर अभियान्ताहरुमा देखिएन। त्यसले एकखालको अस्पष्टता र सनसनीलाई छोडेर जाने बाहेक गर्विलो माहोल बनाउन नसकेकै हो।
मानब तस्करीको आशंकाका धेरै खबरहरु सार्वजनिक हुँदा स्पष्टिकरण सहित नेपालबाट अतिथिको रुपमा बोलाइएकाहरुको नाम लिष्ट पनि सार्वजनिक गर्ने साहस वा जागर आयोजकमा नदेखिनु दुखद नै भन्नु पर्छ। हामी पारदर्शी नहुँदा कसैलाई फाइदा होला नहोला तर एनआरएनएलाई कदापि फाइदा हुदैन। एनआरएनए त्यसमा चनाखो र सहज बन्नै पर्छ।
कसैले प्रश्न उठाउँदा खुसी हुने वातावरण बनाउनु नेतृत्वकर्ताको कर्तब्य हो भने प्रश्न उठाउनु सदस्यहरुको अधिकार हो। केही दिन अगाडी हाम्रो युरोप संयोजकसंग कुराकानीमा पत्रकार युरोप शाखा, युके शाखा र एनआरएनए युरोपको बारेमा भएका केहि असमझदारीबारे छलफल भएको बताइएको छ।
युरोप सम्मेलनलाई सफल बनाउन पत्रकार चिरन शर्माको संयोजनमा एक समिति बनेको रहेछ। त्यसमा पत्रकार महासंघ युरोप र युके शाखाको अध्यक्ष सहित उपसमितिको सदस्यमा राखिएको विषयले विवाद निम्त्यायो। त्यो समिति सम्बन्धित पक्षसंग छलफल गरेर बनाइएको भए विवाद हुने कुरै थिएन। को कहाँ भन्दापनि त्यो समिति कसरी बनाइयो त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। यो पंतिकारलाई पनि त्यो समिति सदस्यमा राखिएको न्यूज हेरेर थाहा भयो।
कमसेकम प्रक्रिया बुझेका अभियन्ताहरुबाट त्यो भुल हुनुहुदैनथ्यो। छलफलले सबै कुराको निकास दिन्छ भने त्यहाँ पनि सहज निकास निस्कन्थ्यो। अहिले बिबादित समितिमा बसेर भन्दा सहजरुपमा र स्वतन्त्रतापुर्वक एनआरएनएको सदस्य भएर सेवा गरिरहने निकास उपयुक्त लाग्यो। सोहि अनुसार गरी गराई दिनुहुन मिडिया समितिका मित्रहरुलाई पंतिकारको बिनम्र निबेदन समेत छ।
अर्को कुरा बसाइ सराइसंग सम्बन्धित बिषयको बारेमा चासो लिदै एनआरएनएले दिपक खरेलको संयोजकत्वमा माइग्रेशन उपसमिति समेत बनाएको रहेछ। जसको महत्व अत्याधिक छ तथापि यसका कार्य योजना र काम गर्ने परिधि बिशेष क्षेत्रीय सम्मेलनमा बढी बुझ्न पाइएला।
केही शीर्षकमा उठाएको रकमबारे अहिले जहाँ तही चर्चा चलेको रहेछ।
त्यो बारे बुझ्दा कार्यालय भवन निर्माण र शंखमुल पार्कको प्रतिबद्धता रकमबारे अलिक भद्दा टिप्पणीहरु सुनिन थालेका छन्। प्रतिबद्धता रकम मध्ये कार्यालय निर्माणको खातामा १९ करोड ७५ लाख ८६ हजार ९ सय ६० मध्ये ११ करोड ६५ लाख ८ हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ मात्र उठेको विवरण बाहिर आएको छ भने शंखमुल पार्कको लागि १ करोड ५३ लाख ६८ हजार २ सय ६८ रुपैया मध्ये १ करोड १७ लाख ८५ हजार ३ सय ८३ रुपैंया बैकमा जम्मा भएको बताइन्छ।
अन्य बोलेको रकम किन उठेन भन्ने सवालमा युरोपबाट बाँकी रहेको रकम उठाउने जिम्मेवारी संयोजक शिब बरुवालले लिएको उहाँको अडियो अन्तर्वार्तामा सुन्न पाइयो, जसलाई सुखद नै मान्नु पर्छ। प्रक्रियामा रहेका उठन्ति नदिएकाहरुको नाम समय अगावै सार्वजनिक गरिनु पर्ने आवाजलाई जायज मानिदैन र मान्नु पनि हुदैन।
एनआरएनएका अहिलेसम्मका नेतृत्वहरुले अहिलेसम्मका मानव ओसार पसार लगायतका आरोपहरुलाई आधारहिन भन्दै आए पनि अघिल्ला सम्मेलन वा मेलाहरुमा चलखेल गर्ने प्रयत्न गरिएका हुन्। त्यसको लागि यो पटक संयोजक लगायत आयोजक देशको समिति पक्कै चनाखो हुनेछ भनेर आशा गर्न सकिन्छ। हामीमा गल्ती वा कमजोरी स्वीकार नगर्ने र अरुलाई आरोपित गर्दा तालि पिट्ने रोग व्याप्त छ। त्यसको लागि अहिल्यै केपो भन्न सकिन्छ र ? अहिले गर्ने भनेको चिन्ता मात्र न हो।